I-Phenylpriracetam (iCarphedon) ipowder (77472-70-9) ≥98% | Abavelisi
/ iimveliso / I-Nootropics powder / Phenylpiracetam (Carphedon) umgubo
Akukho kalo SKU: 77472-70-9. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw inokubaniswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya komlinganiselo we-Phenylpriracetam (Carphedon) powder (77472-70-9), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Phenylpiracetam (Carphedon) i powder video
I-Phenylpiracetam (iCarphedon) isiseko sepowuni Izidalwa:
igama: I-Phenylpiracetam (iCarphedon) ipowder
Ifomula yeMolekyuli: C12H14N2O2
Ubunzima Ezinto: 218.25
I-Phenylpiracetam (iCarphedon) ipowder kwimijikelezo ye-steroids
Iphenylpiracetam powder, ipenotropil powder, powder Carphedon
Ukusetyenziswa kwe powylpiracetam:
Umlinganiselo oqhelekileyo we-phenylpiracetam powderranges ukusuka kwi-100-200 mg ngomthamo, uthathwa amaxesha amathathu ngosuku. Ngenxa yempembelelo yayo enamandla, kucetyiswa ukuba uqale kumgca ophantsi kwerhafu yesilinganiso kwaye ukwandisa ukuba kuyimfuneko.
Ukunyamezela kwi-phenylpiracetam powder kuthiwa ikhule ngokukhawuleza. Ngoko ke, akucebisi ukuba uthathe njengento yokuxhasa imihla ngemihla kodwa njengesixhobo sokwandisa ubuchule bakho xa ufuna uninzi okanye ukuyijikeleza ngezikhathi ezithile.
Ininzi yesiseko senkqubo yesantya inokubangela ukuba i-jitteriness, ixhala kunye nokucasula ngandlela-thile. Nangona i-Carphedon powder ingabangela iziphumo zecala, azinako kakhulu oku kuncedisa kunezinye izikhuthazo. I-Carphedon powder okanye i-Phenylpiracetam yokuncedisa i powder inganyusa ukuphaphazela nokuphucula amandla okuqonda kunye nemiphumo embalwa kunye nomngcipheko ongaphantsi kunezinye izinto ezikhuthaza.
I-Carphedon powder kunye ne-Oxiracetam zibhekwa njengamalungu amabini avuselelayo kwintsapho ye-racetam kwaye zombini zikhetho ezintle ukuba ufuna ukunyusa uqaphele.
Ziziphi iindidi zeMveliso endiyilindeleyo kwiPhenylpiracetam powder?
Iphenylpiracetam powder yenye yeyona nootropics enamandla kakhulu ekhoyo kwimarike namhlanje. It is a nootropic entsha noko ukusuka usapho racetam kwaye inguqulelo elungisiweyo ye piracetam yantlandlolo nootropic, ngaphandle kuqikelelwa ukuba 30 amaxesha 60 enamandla ngakumbi, babe iipropati neuroprotective ngcono, akhuthaze umsebenzi ngokwasemzimbeni. Kuzo zonke izizathu, ipowylpiracetam powder ifumana ngokukhawuleza phakathi kwabasebenzisi be-nootropic.
Isakhelo, ipenylpiracetam powder ngokuyinhloko i-piracetam neqela le phenyl eliqhotyoshelwe kuyo. Oku kwenza ukuba kufane ne-piracetam, i-molecule ye-parent, kodwa ukongeza kweqela le-phenyl liphucula ngeendlela ezimbini ezilandelayo:
1. Eminye amandla - Ukwandisa amandla kunye nemiphumo enamandla ngokuvumela i-molecule ukuba idlule ingqungquthela yegazi-BBB.
2. Ukuvuselela - Iimpembelelo ezingakumbi ezibangelwa ukuba kufane ngokugqithisileyo neprotetlamlamine, njenge-Adderall.
Xa kuthelekiswa nezinye iircetam, i powylpiracetam powder inamandla kakhulu kwaye inokufumaneka ngokukhawuleza nangona xa isetyenziswe ngomlomo. Ubomi obunemizuzu engama-3-5 iiyure kubantu.
Isilumkiso kwi-Carphedon powder) Iphenylpiracetam powder:
Njengamanye ama-nootropiki kwiklasi ye-racetam, kukho imiphumo embalwa yecala echazwe kwi-phenylpiracetam powder xa ithathwa kwi-dosages ephakanyisiweyo. Ukuba unamava emakhanda, kungabonakalisa ukuba kufuneka udibanise okanye ukwandise ukuxhaswa kwe-cholin yakho, edla ngokucetyiswayo xa uthatha iidracetam.
I-Phenylpiracetam powder yandisa imemori kunye nokuqonda ngokubanzi ngempumelelo kune-piracetam, ikhusela ingqondo, kwaye ivakaliswe ukuphucula ukusebenza komzimba. I-Phenylpiracetam powder yongezelela kakhulu kunoma yimuphi umgca we-nootropic ngenxa yemiphumo kunye nemvelo enamandla. Ngokukodwa, abadlali kunye nabafundi banokufumana inzuzo enkulu ngenxa yeendawo ezikhuthazayo nezikhuthazayo. Ukungathethi, linikeza ukunyamezela okunyanisekileyo ukuxinezeleka okubalulekileyo ibhonasi.
I-Phenylpiracetam powder iye yanikezwa namasosha aseRussia kunye nabadlali bezinto zokukwazi ukuphucula ukusebenza komzimba nomzimba.
Kwizifundo, i-phenylpiracetam powder ibonise iziphumo ezilandelayo.
Ukuphucula imemori, ukutshintsha ingqalelo, kunye nezakhono zokusombulula iingxaki kwizigulane ezine-asthenia.
Ukwandisa umqhubi kunye nomsebenzi ogxininisekile kunye nokuphucula imemori kwierati.
Kuboniswe ukukhusela nokunciphisa imiphumo ye-Amnesia.
Ikhono lokunciphisa uxinzelelo kunye nokwesaba impendulo kwiigundane ezibangelwa ukuxilongwa kwe-immune.
Ingxelo ekunciphiseni imiphumo yokunqongophala kokulala ngenxa yempembelelo yabasebenzisi abaninzi.
Iyanciphisa imiphumo ebanda emzimbeni wethu ngokunyusa ukunyamezela kwayo.
Iingeniso ze powylpiracetam powder zibaluleke kakhulu ekufundeni nasekufundeni. Ubume bakhe obukhuthazayo bubuninzi kwindlela yokulala yokulala yokulala, ukuxhaswa kwangaphambili kuncedo, okanye nje ukuphucula isifundo somfundi. Imiphumo yayo kwimemori ivumela ukuphuculwa okupheleleyo kokugcina. Ukukhuthaza nokuphuculiswa kwemizwa kuvumela ukufundisisa ngokubanzi ngokubanzi. Ekugqibeleni, ukukwazi ukunciphisa imiphumo yokuxinzezeleka kunye nokuxhalaba kufuneka kukuvumela ukuba ufunde kakuhle phantsi koxinzelelo.
Iphenylpiracetam powder nayo inkulu ekusebenzeni nasekuphuculeni ukusebenza kwezemidlalo. Iyanciphisa imiphumo emibi yoxinzelelo emzimbeni wakho, obaluleke kakhulu kumdlali, ukunyuka, ukubuyisela kunye nokunyamezela. Oku kunyuka ukunyamezela kwengcinezelo kubandakanya ukukhulisa ukunyamezela komzimba wakho kubanda.
Iphenylpiracetam powder inikezela amandla afana ne-amphetamine. Ukucoceka, ukugxilwa, ukukhuthazwa kwamandla ngaphandle kwe-caffeine jitters kulungile kwikhampani ukunceda ukwandisa ukusebenza kwakho ngexesha lokusebenzela okanye ukhuphiswano. Kukho ncinane ukuphazamiseka, nangona kuthelekiswa ne-caffeine.
Abadlali bezemidlalo mabaqaphele ukuba i-phenylpiracetam powder kwi-World Anti-Doping yoluhlu lwezinto ezichithwe kwaye kufuneka igqibe malunga ne-phenylpiracetam yokuxhaswa kwe powder ngokufanelekileyo.
CARPHEDON powder VS. PIRACETAM powder
Isakhiwo seCarphon sifana kakhulu nePiracetam kwaye zombini i-100% ayifumaneki xa ithatyathwa ngomlomo kwaye inemizuzu efanayo. Ngoko kutheni iCardon (i-Phenylpiracetam) ipowder ibonwa ukuba ikhethwa kwi-piracetam?
I-carphedon powder ithathwa njengento eninzi ngamaxesha e-60 anamandla ngaphezu kwe-piracetam, nto leyo ithetha ukuba kuthatha kakhulu i-Carphedon powder ukujonga iziphumo. Oku akuthethi ukuba ukuthatha amanani aphezulu ePiracetam kuya kunika iziphumo ezifanayo njengeCardon powder. Enyanisweni, ukuthatha iPiracetam ngaphezulu kuza kunika iziphumo ezincitshisiweyo emva kwephuzu elithile, kodwa liya kwandisa amathuba okuba ube nemiphumo emibi.
Iqela le-phenyl longeze kwiPiracetam ukudala i-carphedon powder ivumela ukuba ibe nemiphumo ebanzi kwaye yenza kube ngempumelelo ngakumbi ekugxileni ekujoliseni nasekuphuculeni amaxesha okuphendula.
CARPHEDON powder VS. NOOPEPT powder
Kunzima ukuthelekisa i-Carphedon powder noNoopept kuba zizinto ezimbini ezihlukileyo kunye neengxaki zabo. Kuxhomekeke ngokupheleleyo kwi-chemistry nganye kunye nendlela ekuchaphazela ngayo.
I-Noopept ithathwa njengamaxesha e-1,000 anamandla ngaphezu kwePiracetam, ngokuchasene ne-Carphedon powder 60 amaxesha. Oku kuthetha nje ukuba kuthatha ngaphantsi ukunika iziphumo, kodwa ukuba ayinayo imiphumo oyifunayo, ayinandaba nokuba yinto enamandla kangakanani.
I-Noopept kunye neParphdon powder zombini banakho ukunyamezela. Azikho izifundo ezininzi ezithelekisa ezi zinto zibini, ngoko kunzima ukubeka isigqibo esiphezulu sokuba kukuphi.
CARPHEDON powder VS. PRAMIRACETAM powder
Nazi izinto ezimbini ze-nootropic ezinokuthelekiswa. Omnye uyaziwa ngokuba yi-nootropic isifundo, enye isongezelo esiphezulu. Bobabini baziwa ngokubanzi phakathi kwabasebenzisi be-nootropics kwaye bobabini basecaleni elibi.
Iingxelo zomsebenzisi wePalphdon powder kunye nefuthe lePhenylpiracetam yempuphu iyahluka ngokuphawulekayo. Abanye abasebenzisi babika iziphumo ezinamandla. Ezinye iingxelo zomsebenzisi zithi zinento engathintekiyo okanye zibi nakakhulu, ukuba zibaphelisa baze bathathele. Khangela isikhokelo sethu esipheleleyo ngendlela efanelekileyo yokuthatha ipowylpiracetam powder.
Abasebenzisi be-powder yeCarphdon babonakala bakha ukunyamezela ngokukhawuleza, kwezinye iimeko kwiintsuku ezimbalwa. Ngokusekelwe kwiingxelo, kuthatha ixesha elingakanani ukwakha ukunyamezela kubonakala kungenakulinganiswa. Kunokwenzeka ukuba inxalenye yesizathu sokungafani kwiingxelo zomsebenzisi kukuba abanye abathengisi bayathengisa iphofdon ephosakeleyo.
I-Pramiracetam, ngakolunye uhlangothi, ibonakala inika abasebenzisi iziphumo ezithembekileyo ngakumbi. I-Pramiracetam yaphuhliswa iminyaka ngaphambi kweCardondon powder kwaye yazibonakalisa phakathi kwama-nootropics. Ewe, ezinye zeemicimbi kunye neParphdon powder zingabangelwa yimicimbi yabathengi. Ngoku ukuba abantu abaninzi bayazi kwaye bacela, abathengisi abahloniphekileyo be-nootropic baqala ukuyithwala.
Nika zombini i-Carphedon powder kunye no-Pramiracetam, zama nje ukuqinisekisa ukuba uthenga kumthengisi ohloniphekileyo ukuze wazi ukuba ufumana umgangatho ophezulu. Unokugqiba ukhetha enye kwenye, okanye ungaphetha usebenzisa zombini kunye nebhayisikili phakathi kwezi zibini ukuphepha ukunyamezela. Fumana i-stack efanelekileyo ukunika iziphumo ozifunayo.
I-Phenylpiracetam yokuPhengisa ngePowuni:
Indlela yokuthenga i-carphedon powder: uthenge iPhenylpiracetam powder kwi-AASraw?